Ole Gunnar Solskjaer Oo Si Carro Leh Uga Jawaab Celiyay
By axadle Last updated Jul 18, 2020
Tababaraha Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaa si carro leh uga jawaab celiyay soo jeedinta kooxaha kale ee ah in kooxdiisa ay ka nasiib badan yihiin kuwa kale islamarkaana ay ku faa’ideen go’aamada VAR, isagoo xitaa sheegay inay aheyd inuu ka cawdo garsoore xumo.
Red Devils ayaa ah kooxda ugu badan ee gool laga dhaliyay ay diiday VAR xilli ciyaareedkan Premier League, sidoo kale waa kooxda ugu badan ee rigoore loo dhigay.
Kulankii Crystal Palace, waxay Man United ka badbaaday in rigoore laga dhigo markii uu Victor Lindelof qalad ku galay Wilfried Zaha halka gool uu dhaliyay Andre Ayew loo diiday inuu miilimitir offside ahaa.
Tababaraha kooxda Chelsea Frank Lampard ayaa su’aal ka keenay go’aano qariib ah oo ay sameysay VAR oo ay ku faa’iday Man United xilli ciyaareedkan, halka tababaraha Tottenham Jose Mourinho uu sheegay in kooxdiisa hore uu nasiibka saacidayo iyagoo u tartamaya afarta sarre.
Laakiin Solskjaer ayaa gabi ahaanba diiday warkaas isagoo sheegay in United aysan ku faa’idin VAR in ka badan inta ay ku faa’ideen kooxaha kale.
Markii la weydiiyay hadalkii Lampard uu yiri iyo soo jeedinta ah inay nasiib ku leeyihiin in VAR ay u hiilineyso iyaga, Solskjaer ayaa yiri:
“Imissa saacadood ayaan heysanaa? waxaan fariisan karaa halkaan saacado si aan uga hadlo arintaan. Waxay u muuqataa inuu jiro olole, waxay u muuqataa in dadku ay doonayaan inay saameyn ku yeeshaan garsoorayaasha.
“Waxaan maqlaa dadka oo ka hadlaya nasiib iyagoo sheegaya inaan ka nasiib badanahay kooxaha kale, laakiin haddii aad eegto xaqiiqooyinka, mana doonaya inaan noqdo tababare ka hadla xaqiiqooyinka, laakiin haddii aad offside tahay, waxaad tahay offside. Taasi waa ay cadahay.
“Aan ka hadalno nasiibka, rigooradii aan ka helnay Tottenham daqiiqadii ugu danbeysay ee nalaga diiday waxaan ku weynay labo dhibcood.
“Aan ka hadalno casaankii ay aheyd in la siiyo Oriol Romeu markii uu ku dhawaaday inuu cuuryaan ka dhigo Mason Greenwood. Waxay aheyd in casaan la siiyo, malaha taas ayaa ina caawin laheyd.
“Aan ka hadalno Mark Noble markii ay aheyd in casaan la siiyo iyadoo ay guuldarro naga soo gaartay West Ham.
“Laakiin waxaan ka hadleynaa go’aamada sax ah ee la sameeyay, markii United gool laga dhaliyay ee dib loo saxay
“Sidaasi darteed aniga ayay aheyd inaan ka cawdo go’aamada qaldan ee garsoorayaasha ay nagula kaceen”